China ahaziri Water dabeere na-eitatedomi foil ink Manufacturers, Suppliers, Factory - kwuru - Seeslar Printing equitment
.Lọ > Ngwaahịa > Ihuenyo ebi akwụkwọ > Ink mmiri > Ejiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
A na-akpọ ink a na -e bronomi ọla mado mado, na-e imomi na-ekpo ọkụ ọla ọcha tapawa, tumadi eji maka silk ihuenyo ebi akwụkwọ dị ka akwụkwọ ngwaahịa na uwe.
Xinle Screen Printing Equipment Co., Ltd. lekwasịrị anya na mmepụta nke uwe na-ebi akwụkwọ mama maka ihe karịrị afọ 20. Ọ nwere ọkachamara na teknụzụ ọkachamara na ebe mmepe, ebe a na-anwale ngwaahịa, yana ngalaba na-emepụta ihe. Ọ nwere 2 prọfesọ-ogo agadi injinia, 5 injinia, na 36 mmepụta ọrụ. The ụlọ ọrụ nditịm ndị ISO9000, 2000 na ISO14000 mba quality nkwa usoro, na ya na ngwaahịa na-exported karịa mba 50 na mpaghara na ụwa. Ndị ahịa toro ya nke ukwuu ma ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ya.
1. Product iwebata nkeEjiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
A na-akpọ ink a na -e bronomi ọla mado mado, na-e imomi na-ekpo ọkụ ọla ọcha tapawa, tumadi eji maka silk ihuenyo ebi akwụkwọ dị ka akwụkwọ ngwaahịa na uwe. Ngwaahịa a nwere ikike nzobe siri ike, nchapụta dị elu, ọkụ siri ike na ezigbo ngwa ngwa. Site na SGS, akụkọ nyocha MSDS, nchedo gburugburu na nchekwa. Zọpụta akwụ ụgwọ maka gị, chekwaa ọrụ na oge, ma melite arụmọrụ.
2. Ngwaahịa ngwaahịa (nkọwa) nkeEjiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
Eke oge ihicha
3. Ngwaahịa na ngwa nkeEjiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
Ọ dịghị mkpa ịpị akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọla edo, usoro ọrụ ahụ dị mfe, mbipụta ziri ezi nwere ike nweta mmetụta nke akwụkwọ bronzing, melite arụmọrụ ma belata ụgwọ; ọrụ obibi akwụkwọ ahụ dị elu, ọ naghị adị mfe nnabata, ọ dịkwa mma na gburugburu ebe obibi. Mkpụrụ osisi ahụ na-egbukepụ egbukepụ, dị nro iji metụ aka, ịdị ngwa nke ọma, nwere ọmalịcha mara mma, ọ gaghị ewepụ ma gbaa ọchịchịrị mgbe ogologo oge na ikuku. Nnukwu ike ike, na-eguzogide ọgwụ na-asa na 60â ƒ
Ngwa ngwa:Adabara maka ederede ebi akwụkwọ na akwụkwọ dị iche iche, owu, ndị na-abụghị akwa, akwa TC, akwa akwa, wdg.
4. Ọrụ usoro na ihe ndị chọrọ nlebara anya nkeEjiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
1. Ebido evenly tupu ojiji
2. Buru ụzọ jiri ihe n bronomi ọla nchara iji mee ala;
3. Use 100-120 ntupu screen printing
4. Ikuku akọrọ maka awa 12 ma ọ bụ ọgwụgwọ okpomọkụ: 150 Celsius maka 2-3 nkeji (akwadoro)
5. Maka ụfọdụ akwa chọrọ nnukwu nrapado, biko bido isi, ma chọpụta atụmatụ obibi akwụkwọ dabere na nsonaazụ nnwale ahụ n'ezie.
5. Iru eru ngwaahịaEjiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
Ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi. Ha agafeela usoro nnwale nke ụlọ ọrụ nyocha mba ụwa "MSDS" na "SGS", wee gboo mkpa nchekwa gburugburu ebe obibi nke mpaghara ndị mepere emepe dịka Europe na United States, wee zute ụkpụrụ "ENï½ž71partIII" nke EU na ụdị ule texti.
6. Nkwakọ ngwaahịa na mbupu nkeEjiri mmiri ink na-eitatedomi na mmiri
Ngwa ahia: KG
Mbukota nkọwapụta: 1kg (sample size) 25kg / 50kg
Oge Mbuga ozi: ụbọchị 15
Azịza: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ihe karịrị afọ 20, anyị nwekwara ụlọ karịrị puku ise nke ụlọ nrụpụta. Nwere ike ịhụ foto nke ụlọ ọrụ anyị.
Q2. Enwere m ike ịnweta ihe nlele n'efu? Enwere mbupu n'efu enwere ike?
A: Ee, anyị nwere ike inye gị nnwere onwe n'efu mgbe ị kwuchara ma kwenye na nkọwa niile. Mana anyị anaghị enye ọrụ nnyefe n'efu,
Ọ bụrụ n'ịzụta ọtụtụ ngwaahịa, anyị ga-enye gị ụfọdụ ego.
A: Nkọwapụta nkwakọ ngwaahịa na agba nkwakọ ngwaahịa nwere ike zigara dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
Q4. Kedu usoro ojiji?
A: Use 100-120 ntupu screen printing, natural drying for 12 hours or heat treatment: drying at 150 degrees Celsius for 2-3 minutes
Tags na-ekpo ọkụ: Mmiri dabeere na-eitatedomi foil ink, China, emepụta, suppliers, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ahaziri, price, kwuru, na ngwaahịa
Ink dee mmiri maka akwụkwọ
Ink dee mmiri maka okpomọkụ nyefe-ebi akwụkwọ
Mmiri na-emetụ mmiri
Mmiri lycra ink na-eji mmiri eme ihe
Ink dee mmiri maka naịlọn
Ejiri mmiri foil na-e imomi